आइजीपीसँगै घुस असुली | Tungoon
आइजीपीसँगै घुस असुली
काठमाडौं । जिउमा बर्दी हुँदामात्र रहेछ, शान र मान । बर्दी उत्रिएको हाकिमको हाल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल पुलिसका एकजना अवकाशप्राप्त आइजीपीले केही दिनअघिमात्र भोगे, अर्काथरि कर्मचारीलाई घुस खुवाएर काम लिनुपर्दा ।
आफ्नो पुख्र्यौली जग्गा बेच्ने क्रममा भूपू आइजीसा’बले पाँच हजार कोशेली चढाउनुपर्ने देश हो यो । भूतपूर्व भएको आइजीले पेन्सनबापत महिनावारी ३२–३३ हजार रुपैयाँ पाउँछ । बहालवालाले पाउने तलब करिव ४५ हजार हो । त्यस्तो अवस्थामा छोरा–छोरीले ‘म एमबिबिएस पढ्छु’ भन्यो भने डेढ करोड, विवाह गर्छु भन्यो भने २५ लाख तुरुन्तै तयार पार्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पढाई उस्तै महंगो । रातो बंगला, युलेन्सजस्ता स्कुलमा मासिक शुल्कमात्रै ३० हजार । भर्ना शुल्क अलग्गै डेढ लाख छ । बजार भाउ त्यत्तिकै अत्यासलाग्दो ! त्यसकारण पाइला पाइलामा घुस खुवाउनुपर्ने दुःखमा श्रमजीवीदेखि आइजीपीसम्म परेका छन् । समाज यही हो, देखाउनकै लागि खर्चालु हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले त हो, सुब्बा, खरिदारहरु जम्मा ६ हजार घुसमा समातिएका समाचार छ्याप्छ्याप्ती आउने गरेको !
Previousनिलाम्बरको एग्रिमो आयो, लक्कीको बहिर्गमन कहिले ?
Nextहिजोका डाक्टर, आजका पियन
नेकपा सरकार विरुद्ध आन्दोलन थाल्ने बाबुरामको चेतावनी